Soomaalidu Federaal Ma Qaadan Kartaa?
Qore cabdullahi Gulled Ali
Waxaa dhici karta in qoraalo fara badan oo lagaga hadlayo federal-ka aad aqrisatay,amaba aad dulmartay, hase ahaatee sadarada ugu horeeya marka aad mareyso,aad go,aan satay in aad qoraalka sii wado, amaba aad joojiso.
Waxaa soomaalida ka hadashay federaalku ay u badnaayeen labo kooxood, oo HAA iyo MAYA la yiraahdo, qoraa kastaa oo aad aragtaana labadaa oraah ayuu hoos imaanayaa, waxaana dhacda in goobaha badankood looga doodo amaba la isu daliishado aragtida ay qoraan dadweynaha somaliyeed.
Waxaan jeclahay in aan sheego doodaheyga ku saleysan somalidu federaal ma qaadan kartaa, mana tahay wax maanta loo baahan yahay, maxaase soomaaliya federaal loogu dooranayaa, maadaama federaal loogu talagay dad kala duwan [diin ahaan, midab ahaan, luqad ahaan]
FEDERAAL: Xukuumadii Maxamed Siad Barre aya abuurtay dareenka ah in madaxa uu ka noolaado wadanka oo dhan, cid walbaana ay ku tagri fasho hantida wadanka, dhammaan gobolada dalkana la iska iloobo, hadaanan dil iyo dhac loo geysanba.Isticmaalka qabaailada iyo isu hubeyntoodana waa mida dhibta soomaalidu ay soomartay loo aaneeyn karo, ilaa iyo maantana cabsidaii kala gashay qabaa'ilada soomaaliyeed xalkeeda loo fadhiyo.
FEDERAAL: Dagaalkii sokeeye ee uu wadanka somaliya soo maray ayaa sababay in uu wadanku kala xirmo, taasina ma aha mid soomaalida lagu qasbay, ee waa mid ay iyadu isku qasbeen. Halkaa waxaa ka abuurmay nidaam gaar ah oo federaal aanan waxba dhaamin, taasina waxaa la oran karaa waa waxa sababay in uu yimaado maanta dareenka ah ismaamul hoose oo ay goboladu yeeshaan, maadaama ay ka go'een gobolada intoodii kale.
FEDERAAL: Waxaa badanaa la arkaa qabaailada soomaalida oo hadba ururka ay sameeysanayaan dheeli tir qabiil ku sameeya, waxaa badanaaba dhacda in awood qeybsashada si kastaba haku timaadee lagu saleeyo qabaailada somalida Hadaan tusaale u soo qaadano shirkii carta iyo kan haatan loo fadhiyo ee Mbeghati in wax qeybsashadu ay sal ahaan tahay qabiil, waxaana sida lagu wado dhici doonta in maamulkii carta lagu dhisay uu asal ahaan u noqday qabiil, awalna ay qabiilo kala duwan oo isu yimid ay ahaayeen.
FEDERAAL: Yaa balan qaadi kara in a madaxweyne african ah oo awalba sida uu ku soo baxay ilaahay og yahay, xilka loo dhiibaayi uu si wanaagsan uga dego, yaase aamini kara qatarta ka dhalan karta awooda wadanka oo hal meel la isugu geeyaa waxa ka dhalan kara oo tagri fal ah. Tusaalena waxaa kuugu filan in aad cabdiqasim ku qaadato, oo laga fur furi la'yahay xilkii awalba dhinaa ee carta loogu soo dhiibay. Hadaad dooneyso qasaare kaa lamid ah, iyo dictator dambe, qaladkii dhacay ee 21-kii sano wadanku ficii kaga haray aanu dib ugu laabano, gees ka gees dhaqaalaha iyo nabadgelyada wadanka aanu hal nin gacanta u wada gelino, nin walboowna nasiibkaa.
FEDERAAL: hadaba waxaa ay ila tahay in aan kuu soo koobo waxa uu federaal yahay hadaadba qoraalka halkiisa hoose soo gaartay, hadaad garaneyso waa barwaqo, hadii kalese, waxaan ku soo koobayaa saddex qeybood oo yar yar.
1- FEDERAALISM Hadii ay jiraan dowlado horay u dhisnaa oo doonaya sababo dhaqaale amaba nabad gelyo awgeed in ay dhulka isu fyrtaan awooda wadankana qebsadaan, si aaney qatar uga iman dibeda iyo gudahaba. Arinkaan qasare iyo wanaagba waa yeelan karaa, tusaale ahaan YEMEN oo uu heshiisku sidaa ahaa, balse YEMENtii kale ay xoog u sheegatay. Dhinaca wanaaga waa european uninon
2- FEDERAALISM Dad iyagu qowmiyado u kala nool, oo diin ahaan, luqad ahaan, amaba midab ahaan kala duwan, oo lagaga baqayo in ay isku tuntaan, xaqdarese ka dhacdo.Waxaa badanaa awooda laga dhigaa power-sharing sida Bosnia iyo goobo badan oo aduunka kamid ah. waxaa badanaaba dhici kataa in soomaalida halkaan ay ka soo geli karto sababta federaalka loo hadal hayo,maadaama kala duwanaan shaha qabiilku uu yahay mid lamid ah midabka amaba dhaqanka amaba luqadaha. Macnuhu maaha in soomaalidu ay kala duwan tahay, hase ahaatee maadaama kala duwanaanshaba ay jirto, oo goob walbaa ay ka muuqato kala duwanaan shaha ayaa dhici karta in aduun weynuhu xal u arkay, in soomaalida wax loo kala saaro. U Fiirso waxa kala hadlaya waa inaga soomaali ahaan, waxa dehxdooda isu xulufeysanaya waa isla soomaalida, oo qabiil walbaa kii lidka uu ku ahaa uu u raadsnayo saaxiib uu kaga hortago.
3- FEDRAALISM Wadan dalkiisu iyo dadkiisuba isku af diin iyo midabba yahay oo xal nabad gelyo loo waayey, loogana cabsi qabo in ay naftooda wax is yeeleeyaan deriskoodana wax yeeleeyaan, sida Germanay, oo iyadu laba loo sii kala qeybiyey maadaama dagaal galkoodu uu ahaa mid qasaare badan keenay, iyo wadamada ku xeeran oo iyana ka baqay in ay soo marto xukuumad taas la mid ah oo awooda wadankaba gacanta ku ridata sida ay doontana ka yeesha. waxaa taariikh aad u fog ay yurub ku nooleed nidaam u dhigma midka ay soomaalidu maanta ku jirto, waxaana dadku badana wada garanayaa dagaaladii sokeeye ee soo maray mareykanka kuwaas oo kalifay naf iyo maalba waloow soomaaliya ay wax uun ku kala gedisnaayeen.
FEDERAAL: hadaba anigu waxaan qabaa in la tijaabiyo federalis-ka, aanan lagu deg degin xukuumad hal madax leh oo qasaaraheedu uu noqon karo 50%. waxaan qoraalkeygan ku soo geba gebeynayaa in wixii qalad ah oo iga dhacay laga raali ahaado, lana isoo xasuusiyo si aan raali gelin uga baxsho hadii ayba jirto.
nabadgelyo iyo is aragti dambe oo xiiso leh